"Wadada Crossy Road" waxay imaan doontaa Apple Arcade | Wararka IPhone
"Crossy Road Castle" ayaa imanaya Apple Arcade
Haddii mar uun lagugu jiiday khuraafaadka ah “Crossy Road”, maalmo yar gudahood waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku ciyaarto nooc saddex-geesood ah oo cusub: «Crossy Road Caste».
Hipster Whale, abuuraha ciyaarta caanka ah ee “Crossy Road”, ayaa hada ku dhawaaqay inay hayaan ciyaar cusub, markan oo leh aragti 3D ah oo la yiraahdo «Crossy Road Castle». Waxaad muujisay in lagu sii deyn doono gudaha gaar u ah Apple Arcade, markaa suurtagal ma noqon doonto in lagu ciyaaro nidaam kale oo aan ahayn kan Apple. Noocaan cusub wuxuu noqon doonaa mid badan, oo leh 4 ciyaartoy isku mar ah. Ciyaartu waxay ka kooban tahay ku boodbooda daar weyn, iyo booqashada qolalka kala duwan si ay u soo ururiso lacagta birta ah ugana fogaato dabinnada la dhigo.
Whale ma aysan siinin taariikh cayiman oo ay ku bilaabayso, laakiin ma qaadan doonto maalmo badan in la arko iftiinka. Ka mid noqoshada barnaamijka Apple Arcade, Waxaa lagu ciyaari karaa dhammaan aaladaha la jaan qaada barnaamijkan: iPhone, iPad, Mac iyo Apple TV.
Kaliya dhowr todobaad ka hor in Apple Arcade uu shaqeynayo, oo buugiisa ciyaaraha la heli karo uu sii kordhayo marba marka ka sii badan, in ka badan 100. Waxaa kaliya lagu heli karaa iyada oo loo marayo bil kasta oo ah 4,99 euro. Dabcan, waad isku dayi kartaa dhammaan cayaaraha laga heli karo barxadda bisha koowaad bilaash. Gebi ahaanba "nadiif" cayaaraha: xayeysiis majiraan, wax iibsi gudaha ah ah ma jiraan. Diiwaangelintan waxaa lala wadaagayaa dhammaan xubnaha qoyska, wax aad muhiim ugu ah kuwa naga mid ah ee carruurta leh, iyo sidoo kale xasiloonida maskaxda ee ogaanshaha in ciyaarna aysan qarsooneyn iibsashada barnaamijka.
Waxay u muuqataa in Apple ugu dambayntii ay kor u qaadayso aagagga ciyaaraha, oo ah mawduuc ay had iyo jeer xoogaa diidmo ka muuqato. Barxad shaki la'aan yeelan doonta taageerayaal badan oo daacad ah, illaa iyo inta Apple ay ku hayso warar bille ah. Hadda dhibaatadu waxay la imaan doontaa awoodda keydinta ee aaladahayaga, haddii aan bilowno soo degsashada ciyaaro badan. Waa arrin aan ku xisaabtami doonno marka aan iibsaneyno qalab cusub oo Apple ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » "Crossy Road Castle" ayaa imanaya Apple Arcade
IPhone 11 Pro wuxuu leeyahay cod ka xun iPhone XS sida uu sheegayo DxOMark
Iibsiga Apple ee Shazam wuxuu kuu oggolaanayaa inaad kordhiso faa'iidada iyo tirada isticmaaleyaasha